SLT SPORTS: Ciyaaryahanka Honda Oo AC Milan Guul Ku Hogaamiyay Iyo Qodobo Kale Oo Xiiso Badan | Somaliland Today
← Nin Ciraaqi Ah Oo Gacantiisa Ku Sameeyay Gaadhi Gaashaaman Si Loogula Dagaalamo Daacish.
Falaqaynta Kulanka West Brom VS Manchester United Iyo Xaqiiqooyin Ku Saabsan Kulankan. →
SLT SPORTS: Ciyaaryahanka Honda Oo AC Milan Guul Ku Hogaamiyay Iyo Qodobo Kale Oo Xiiso Badan
(SLT-Italy)-AC Milan ayaa guul muhiim ah ka soo gaadhay kooxda Hellas Verona oo ay gurigeeda ku booqatay. Milan ayaana saddexda dhibcood ku soo qaadatay laba gool oo uu dhaliyay Keisuke Honda halka goolka kala ahaa mid ay kooxda H.Verona iska dhalisay.
Milan ayaa ka soo aarsatay H.Verona taas oo xili ciyaareedkii hore kulankii gurigeeda ku xasuuqatay Milan 5:3. Milan ayaa kulankan iskeentay iyadoo uu ganaax kaga maqnaa Nigel de Jong halka Riccardo Montolivo uu dhaawac ku maqnaa, laakiin waxaa kulankan taam u noqday Diego Lopez, Giacomo Bonaventura, Marco van Ginkel iyo Jeremy Menez
Milan ayaa hogaanka la wareegtay daqiiqadii 21 aad ee qaybtii hore ee ciyaarta kadib markii uu difaaca H. Verona ee Rafa Marques uu gool hadiyad ah iska dhaliyay.Ciyaarta ayaana noqotay 1:0 ay Milan ciyaarta ku hogaaminayso.
Milan ayaa daqiiqadii 27 aad hogaanka dheeraysatay kadib markii uu Keisuke Honda kooxdiisa u dhaliyay gool aad u qurux badan. Honda ayaa kubbada fiican oo uu ka helay El Shaarawy kooxdiisa ugu dhaliyay goolka labaad, waxayna jatiijada ciyaartu noqotay 2:0 ay Milan hogaanka ku dheeraysatay. qaybtii hore ee ciyaarta ayaana sidaa lagu kala nastay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Milan halkii ka sii waday qaab ciyaareedka fiican ee ay qaybtii hore ee ciyaarta ku soo bandhigtay.Daqiiqadii 56 aad ayuu markale Keisuke Honda kooxdiisa u dhaliyay goolka saddexaad. goolkan ayuuna caawiyo ka ahaa Adil Remi.
H. Verona ayaa goolka kaliya la timid dhamaadkii ciyaarta waxaana daqiiqadii 87 goolka calanka u dhaliyay N. López. markii uu dhamaaday waqti rasmiga ah ee ciyaartu isla markaana uu gabo gabo yahay waqtiga dheeriga ah ayaa ciyaarta laga saaray Rafa Márquez oo ka tirsan Verona. ugu danabayn ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3:1 ay Milan ku soo qaadatay saddex dhibcood oo aad muhiim ugu ah.
Muxuu Michel Platini Ugu cadaadinayaa Franck Ribery Inuu Xulka France Dib Ugu Soo Laabto?
Madax waynaha xidhiidhka kubbada Cagta Qaarada Yurub ee Uefa Michel Platini ayaa markale ku celiyay in Frack Ribery lagu ganaaxo haddii uu diido inuu dib ugu soo laabto xulka qarankiisa France.
Ribery ayaa bishii August ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah, isagoo sababta ku sheegay inay yihiin arimo shaqasi ah oo u gaara ah, wuxuuna cadeeyay inuu yimid waqtigii uu ka fadhiisan lahaa waajibaaka xulka qarankiisa France isla markaana uu u bilaaban lahaa waa cusub oo noloshiisa ah. Ribery ayaa xulka qarankiisa u saftay 81 kulan.
Platini oo aan ka hadal ciyaartoy badan oo intii ka danbaysay koobkii aduunka ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah ayaa culays wayn saaraya gool dhaliyaha kooxda Bayern Munich ee Ribery.wuxuuna Platini ku adkayanayaa in Ribery lagu ganaaxo go’aanka uu kaga fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah.
Platini oo u waramayay BeIn Sports ayaa yidhi: “Markaan eegay arinta Ribery waxaan Uefa kula taliyay in ciyaartoga qarankiisa looga yeedho ee diida saddex kulan oo kooxdiisa ah lagu ganaaxo. maxaa dhacaya haddii ay ciyaartoyda Raphael Varane, Karim Benzema iyo kuwa kale yidhaah daan dan kama lihin xulka qaranka France?.Maxaan samaynaynaa haddii ay sidaasi dhacdo?
Inkasta oo uu Ribery ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah ayuu Platini aaminsan yahay inay France ku guulaysan karto koobka Yurub marka wadan kooda lagu qabto laba sano kadib.Ribery ayaa koobkii aduunka dhaawac ku seegay kaas oo u diiday inuu kooxdiisa Bayern Munich u ciyaaro bilawga xili ciyaareedka.
Inter Milan Iyo Napoli Oo Barbaro Galay, Xili 11 Kii Daqiiqo Ee Ugu Danabayay Ay Afar Gool Iska Dhaliyeen
Kooxha Inter Milan iyo Napoli ayaa ku kala baxay barbaro 2:2 ah, waxaana Inter Milan ka caawiyay inay halka dhibic la wadaagto laacibkeeda Hernanes oo waqtiga dheeriga ah goolka barbaraha ukeenay. labadan kooxooda ee Inter Milan iyo Napoli ayaa 11 kii daqiiqo ee ciyaarta ugu danabaysay iska dhaliyay afarta gool ee ay ciyaarta iskaga dhaliyeen.
Inter Milan ayaa gurigeeda Stadio Giuseppe ku soo dhawaysay kooxda Napol oo marti ugu ahayd.Kulankan oo ahaa mid aad u adag ayay labada kooxood ku dadaalayeen inay mid kastaaba garoonka kala carawdo saddexda dhabcood. Inter Milan oo kulamadii ugu danbaysay ku jirtay xaalad aad u xun ayaa doonaysay inay iyadoo ciideeda ka faa’iidaysanaysa ku soo laabto tubta guusha.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayayna labada kooxood wax goolal ah iska dhalin, isla markaana waxay qaybtii hore ee ciyaartu ku soo dhamaatay iyadoon wax fursado badan oo goolal noqon kara ayna samaynin labada dhinac.
Qaybtii danbe markii layskugu soo laabtay, ee ay koox kastaaba soo qaadatay dardaaranka tababaraheeda ayay isku dayeen inay fursado goolal noqon kara abuuraan. Daqiiqdii 79 aad ayay Napoli ciyaarta hogaanka u qabatay waxaana goolkaas u saxiixay José Callejón. Ciyaarta ayaana noqotay 1:0 ay Napoli ku hogaaminayso.
Hogaanka ay Napoli ciyaarta u qabatay ayaan ahaan mid sii waara waxaana goolka barbaraha Inter Milan u keenay Fredy Guarín oo ciyaarta badal ku soo galay. Guarín ayaa marka uu goolka dhaliyay ciyaarta ku jiray wax ka yar hal daqiiqo, natiijada ciyaarta ayaana noqtay barabro 1:1 ah.
Napoli ayaa u muuqatay inay guulaysatay kadib markii uu daqiiqadii 90 aad ee dhamaadka ciyaarta uu goolka ka labaad markale José Callejón u dhaliyay kooxdiisa Napoli, Ciyaarta ayaana noqotay 2:1 ay markale Napoli hogaanka kula wareegtay.
Hal daqiiqo kadib ayuu Hernanes kooxdiisa Inter Milan ka badbaadiyay guul daro ku soo gaadha gurigeeda, waxayna ciyaatu ku soo dhamaatay barbaro 2:2 ah.Inter Milan ayaa horyaalka kaga jirta kaalinta 9 aad, waxayna todobadkii kulan ee horyaalka ugu horeeyay ka qaadatay 9 dhibcood oo kaliya, waxayna 10 dhibcood ka hoosaysaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Juventus. Napoli ayaa ku jirta kaalinta 7aad waxayna todobadii kulan ee ugu horeeyay ka ururusatay 11 dhibcood.